IMINDENI EWU 40 ISULWE IZINYEMBEZI – Sivubela intuthuko Newspaper
ABASESITHOMBE ngabanye babantu abangu-40 abathole usizo lweVuma 103 fm ebinikezela ngalo ngokubambisana kanye noMnyango wezokuThuthukiswa Komphakathi KwaZulu Natal.Ongowesihlanu kusuka kwesokunxele nguMnuz. Phumlani Nkwanyana okunguyena oshayela uhlelo iMega Grace Hour
LUNIKEZELE ngosizo emindenini engu-40 entulayo yakwa-A, eMlazi uhlelo lweVuma 103 fm, iMega Grace Hour ngokubambisana noMnyango wezokuThuthukiswa komphakathi KwaZulu Natal, oholwa nguNkk Nonhlahla Khoza.
Yonke imindeni inikekelelwe ngegilosa yokudla, izingubo zokugqoka kanye nobhlankethi bokulala. Lolu hlelo olushayelwa nguPhumlani Nkwanyana lungena njalo phakathi nezinsuku ngehora lesihlanu kuze kubumbane elesithupha. Kulona lolu hlelo kunesigatshana esibizwa ngokuthi: “Zesuliwe Izinyembezi,” kulapho abalaleli bohlelo bethola ingqayizivele yethuba lokubika ngezinkinga ababhekene nazo emakhaya.
Ngenxa yokuthi bese bebaningi kakhulu abantu abacele usizo kulesi sigatshana, uPhumlani Nkwanyana ubone kungcono ukuba babahlanganise bonke ndawonye maqede babanikeze usizo kanye kanye. Echaza uthe: “Inhloso enkulu wukubona abalaleli bethu ababhekene nezinkinga bekuthola ukusizakala. Kulesi sigatshana sithole abalaleli abaningi ebebecela usizo ngezinto ezahlukene.”
Ngenxa yokuba matasa, uNkk Khoza akakwazanga ukuphumelela. Bekukhona uNkk Nombulelo Gebashe onguMqondisi walo Mnyango KwaZulu Natal. Ukuchaze njengento emqoka kakhulu ukunakekelwa kwabantu ikakhukazi kwalabo abadla imbuya ngothi.
Uthe kubajabulisile kakhulu njengoMnyango ukuphonsa itshe esivivaneni ngenhloso yokusiza imindeni entulayo. Wenze isethembiso sokuthi nakanjani yonke imindeni engu-40 abayisizile ngalolu suku, bazoqhubeka nokuthi bayinakekele kuze kuphele izinyanga ezintathu ezigcwele.
Echaza uthe: “Siyabonga kakhulu kwiVuma 103 fm ethathe isinqumo sokuba ize izongqongqoza kithina icele usizo. Kuyajabulisa ukubona ukuthi basekhona abantu abakukhuthalele ukusiza abanye abantu. Ngokusukuma kwenu namhlanje sisiza abantu abangu-40. Siyabonga kakhulu ngokuzinikela kwenu.”
UNkk Sbongile Maphumulo ongomunye wabahlomulile ubonge wanconcoza kwiVuma fm kanjalo nakuMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu Natal. Uthe ungunina wabantwana abathathu wathi ikati lilele eziko selokhu waphelelwa ngumsebenzi wokuba ngunogada ekuqaleni konyaka. “Kukhulu lokhu abasenzele khona namhlanje. Siyabonga kakhulu,” usho kanje.
IZINYEMBEZI ZENJABULO ENIKEZELWA NGENDLU